समाज - Diaspora Nepal Diaspora Nepal
गोर्खाली समाज युकेको अध्यक्ष पदमा अशोक ढकालको उम्मेदबारी
लण्डन । गोर्खाली समाज युकेको अध्यक्षमा अशोक ढकालले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । भोली अप्रिल २३ तारिख शनिवारका दिन साउथ ह्यारोस्थित फुटबल क्लवमा हुने समाजको आठौँ अधिवेशनमा ढकालले अध्यक्ष पदमा
सानफ्रानसिस्कोमा आयोजित नेपाल डे परेडमा हजारौं नेपाली सहभागी
अमेरिका- संयुक्त राज्य अमेरिकाको सानफ्रानसिस्को सहरमा गत अप्रिल ९ तारिख नेपाली र अमेरिकी झन्डा फहराउँदै करिब २,००० हजार नेपाली र केही सङ्ख्यामा विदेशीहरू नेपाल डे परेडमा सहभागी भए । नेपाली
राम गलामीलाई ३ मतले पराजित गर्दै मगर सघं युकेको अध्यक्षमा सिता पुन विजयी
लण्डन । मगर सघं युकेको अध्यक्षमा पहिलो पटक महिला नेतृत्व निर्वाचित भएको छ । संस्थाको सातौँ साधारण सभाबाट पहिलो पटक महिला नेतृत्व सम्हाल्दै सिता पुन मगरले अध्यक्षमा जित हासिल गरेकी
ए स्टार फाइनान्सियलका प्रबन्ध निर्देशक दर्लामीलाई सफलता
लण्डन । ए स्टार फाइनान्सियल सोलुसन्स सर्भिसेजका प्रबन्ध निर्देशक मिन दर्लामीले महत्वुर्ण सफलता हासिल गरेका छन । नेपाली फाइनान्सिलय एडभाइजरका रहेका दर्लामी चार्टर्ड फाइनान्सियल एडभाइजर बनेका हुन् । उनी लण्डनमा
बेक्स्ली नेपाली समाजको “सबैले नाच्न सक्छन् ” दोस्रो चरणको भर्चूअल कार्यक्रम सुरू
लन्डन । बेक्स्ली नेपाली समाजको “सबैले नाच्न सक्छन् ” (Everyone Can Dance)” को नाराका साथ दोस्रो चरणको कार्यक्रम भर्चूअल माध्यमबाट सुरू भएको छ। पहिलो चरणको कार्यक्रम सफल भएपछि सहभागी सदस्यहरूको
सामाजिक अभियन्ता सार्कीले चितवनमा चलाए ‘शुद्ध पानी वितरण अभियान’
लण्डन । सामाजिक अभियन्ता धनबहादुर सार्कीले नेपाल बसाईका क्रममा समाज सेवालाई निरन्तरता दिदै पार्वतिपुरमा ‘शुद्ध पानी वितरण अभियान’ सुरु गरेका छन् । आफुले बाल्यकाल विताएको गाउँ पार्वतिपुरका जनतालाई शुद्ध पानी
यात्रु ठगेको आरोपमा ट्राभल कन्सोल यूकेसहितका कम्पनीलाई कारबाहीको सिफारिस
काठमाडौँ । कोराना संक्रमणको दोस्रो लहरका बेला नेपालबाट चार्टर उडान भरि यात्रुहरु ठगी गर्ने ट्राभल्स एजेन्सीहरुलाई कारवाहीको सिफारिस गरिएको छ । छानबिन समितिले प्रभास ट्राभल एन्ड टुर्स, एमएलके ट्राभल्स डटकम,
डा. कृष्ण उपाध्यायको ‘दि गोस्ट्स इन द हिल्स’ उपन्यास बजारमा
मानव अधिकारकर्मी डा. कृष्ण उपाध्यायले नेपालको माओवादी आन्दोलनको सन्दर्भसंग जोड्दै ‘दि गोस्ट्स इन द हिल्स’ नामक उपन्यास प्रकाशित गरेको छन् । उक्त पुस्तकको किण्डल संस्करण र पुस्तक अमाजन मार्फत बजारमा उपलब्ध छ । एकजना दलित